‘Government doesn’t understand the plight of migrants’ (English) ( Aug 11, 2014)
306 March 27, 2015
This week DVB Debate asks: “How can we protect migrant workers?” Over the last few decades, social, economic, and political conditions in Burma have led to mass migration internally and abroad. Seeking better opportunities and higher wages away from home, Migrants often end up in low skilled jobs where they sometimes face exploitation and harassment.
“Foreign aid can create dependency” (Burmese) (Jun 18, 2014)
196 March 28, 2015
ဒီတပတ် ဒီဗွီဘီ ဒီဘိတ်မှာ မြန်မာပြည်ထဲကို ၀င်လာတဲ့ နိုင်ငံခြား အကူအညီတွေ ဘယ်ရောက်သွားသလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ဆွေးနွေးကြပါတယ်၊ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ အတူ စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အနောက်နိုင်ငံတွေက နိုင်ငံခြား အကူအညီတွေကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေကို စတင် ဖြေလျှော့ပေးလာ ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာ အားကိုးလောက်တဲ့ အခြေခံ အဆောက်အဦ မရှိသေးဘဲနဲ့ အကူအညီငွေတွေ ဒလဟော ၀င်လာတာကို ဝေဖန်သူတွေက စိုးရိမ်ကြပါတယ်။
How political is showbiz? (Part B) ( May 11, 2014)
322 April 3, 2015
“ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလမှ­ာ နယ်ပယ်အသီးသီးက ထင်ရှား ကျော်ကြားသူတို့ရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ဘယ်လောက်လိုအပ်လဲ” ဆိုသည့်ခေါင်း စဉ်ဖြင့် ၁၁.၅.၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ဒီဗီဘီ ရုပ်သံသတင်းဌာနမှ ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့သည့် ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ် (ဒုတိယပိုင်း)။
Will the census bring consensus?(Part B) (Mar 24, 2014)
183 April 17, 2015
အစိုးရရဲ့ မကြာခင်ကောက်ယူတော့မယ့် ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ပြည်သူတွေဘယ်လောက်ထိသဘောတူပူးပေါင်းပါဝင်န­ိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ခေါင်း စဉ်ဖြင့် ၂၃.၃.၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ဒီဗီဘီရုပ်သံသတင်းဌာနမှ ထုတ်လွှင့်ပြ သခဲ့သည့် ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ် (ဒုတိယပိုင်း)။
Who will be Burma’s business innovators? (Part C) ( Feb 9, 2014)
379 April 18, 2015
ဘယ်သူတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စွန့်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်လာလ­ဲ ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၈.၂.၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ် (တတိယပိုင်း)။
Peace process (Part 2) (Oct 20, 2013)
269 April 25, 2015
မြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များန­ှင့်ပါတ်သတ်ပြီး ဘယ်လိုရှိနေလဲ ဘာတွေလိုအပ်နေလဲ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆီသို့ ဘယ်တော့ရောက်မလဲ စသဖြင့် ၁၉.၁၀.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် ဆွေး နွေးငြင်းခုံခဲ့ကြသည့် DVB Debate ဒုတိယပိုင်း ။
Forget or Forgive (Part 1) (Aug 25, 2013)
404 May 22, 2015
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်က စစ်တပ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်ကျူးလွန် ခဲ့တာတွေကို ခုချိန်မှာ မေ့ပစ်မလား ခွင့်လွှတ်မလားဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ 24.8.2013 ရက်နေ့ကပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ်အစီအစဉ် ပထမပိုင်း။
1153 July 10, 2016
859 March 4, 2017